musha FOOTBALL ZVAKAWANDA Vatambi veClassic Zinedine Zidane Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Nhabvu inonyatso kuzivikanwa neNickname; 'Zizou'. Yedu Zinedine Zidane Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zuva.
Kuongorora kunosanganisira nhoroondo yeupenyu hweZinedine Zidane pamberi pezita, hupenyu hwemhuri uye zvakawanda zvishoma zvinozivikanwa nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezve ake ekugadzirisa kugona asi vashoma chete vateveri vanofunga Zinedine Zidane Biography Nhau iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve nzira, ngatitangei.
Karim Benzema Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Zinedine Zidane Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Zinedine Yazid Zidane akaberekwa musi we 23rd waJune 1972 muMarseille, France kuna Smaïl Zidane (baba) naMalika (amai) vose vanobva kuAgeria.
Zidane akakurira muLa Castellane, imba-yakazara dzimba dzekuvandudza muMarseille, guta rechiteshi kumaodzanyemba kweFrance. Kunze kwekuparwa kwemhosva, kushaya mabasa uye mwero wekuzviuraya zvaive zvakakwirira zvinotyisa munharaunda yekutama.
Arjen Robben Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Baba vake, Smail Zidane vaiva nebasa rakasimba semurindi wechitarisiko chechitoro usiku hwose, kunyange zvazvo mhuri yaifanira kugara munzvimbo dzakasimba-kwete vose vanomwe vaigona kugara pamwe chete uye vadye. Izvi zvakaita kuti wechidiki Zizou akure chido chokugumisa urombo mumhuri yake.
Zinedine Zidane Biography Chokwadi - Basa Rokutanga:
Akaunzwa kumutambo wenhabvu pazera nyoro remashanu pamwe nevana vemunharaunda vaigara vakamukomberedza.
Panguva iyoyo, pakanga pasina tariro kuNorth African French Migrant mumutambo. Kutaura zvazviri, Zizou ndiye akasiya muenzaniso wekuti vamwe vatevere.
Kune shamwari dzake dzaitama, nhabvu waingova mutambo wekupfuudza nguva. kwaZizou pachake, nhabvu yaive yekuda kupedza hurombo hwakatambudza mhuri yake nevadikani. Izvo hazvina kutora nguva pamberi pake kutanga kwake kwekutanga kwakabata maziso emitambo inozivikanwa.
Casemiro Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Nekudaro kuda kwake kunyoresa kukirabhu yevechidiki nhabvu kwakauya kwakayerwa thru. Zizou akanyoreswa kuUS Saint-Henri Nhabvu nhabvu mugore ra1981.
Sezvo iye oga muAgeria anobva kune imwe nyika achitamba mukirabhu, Zizou aigara achiitwa nyaya yerusarura uye kusekwa nezve kwake ghetto kwakatangira nevakaroora nevapikisi.
Akavhura nzeve. Akatora imwe nzira yekusiya kirabhu kuSE Septèmes-les-Vallons kwaakatamba kubva 1983 kusvika 1986.
Gonzalo Higuain Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Imwe nhanho yekuenda kuCannes kubva muna 1986. Akapedzisa hudiki hwake basa imomo mu1989. Akatanga rake rehudiki basa se9 asi akazotamira kune gumi basa.
Wechidiki Zidane- Kubva pahudiki kuenda kune Mukuru Basa.
Idzi nzeve dzisinganzwi nezvekusarurana asi hazvina kuramba nguva refu mushure mekunge ajoina timu yepamusoro yeCannes. Akatora mukana wekurwa nevaya vaimushungurudza.
Izvi zvakakonzera kurangwa sezvo aipedza mazhinji emavhiki ekutanga ebasa rake rekuchenesa basa sechirango chekurova vatambi vaiseka kwaakabva.
Zinedine Zidane Hupenyu Hwemhuri:
Zinedine Zidane anobva kumhuri inozvininipisa. Kusiyana nevanhu vemunharaunda, mhuri yeZidane inoremekedzwa zvakanyanya.
Toni Kroos Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
Ivo vairarama hupenyu hwakadzikama panguva iyoyo kusafanana nevamwe vaive nechokuita nemhosva yakakura uye vaive vasingashande.
Baba vake vaifananidzirwa pazasi vaimbova murume-wemba-basa nehunyanzvi. Akazorora mushure mekunge mwanakomana wake azviita munhabvu.
Zinedine Zidane Baba- Smaïl Zidane.
Amai vake Malika Zidane, vanoratidzirwa pasi apa vakanga vari vekuvakwa kwemusha. Va Malika Zidane vakagamuchira basa rekunge mwana wavo akazviita mumutambo.
Zinedine Zidane Amai- Malika Zidane.
BROTHERS: Zinedine Zidane ane hama dze3 mumifananidzo yose iri pasi apa.
Marco Asensio Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Zinedine Zidane Hama.
Madjid Zidane (kuruboshwe), Farid Zidane (pasi kurudyi) naNoureddine Zidane (kumusoro) vakabatanidzwazve nemhuri yese yeZidane musi wa7 Chivabvu 2006 yekuonekana kwaZinedine kunhandare yeSantiago Bernabeu.
Idzo hama nhatu dze "Zizou" dzakabatana zvakafanana mukugadzirisa zvinhu zvake semutambi nemurairidzi.
HANZVADZI SIKANA: Zinedine Zidane ane hanzvadzi yechidiki anonzi Lila Zidane.
Zinedine Zidane Sista - Lila Zidane.
Lila anoshandawo mubasa rekuita Zidane. Ari kutarisira kutarisira kodzero dzake dzechifananidzo.
Raphael Varane Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Zinedine Zidane Hukama Hupenyu Hupenyu:
Zinedine Zidane Love Story inotanga pano. Pazera re 17, Zidane akasangana nemudzimai wake weramangwana, Véronique Fernández (akaberekerwa Aveyron veSpain vanobva), paanenge achitamba Cannes munguva ye 1988-89. Vakanga vane izvo vanhu vanonzi Chokwadi Rudo.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Veronique Fernandez Lentisco mutambi uye modhi asati azivikanwa semukadzi weumwe wevakuru vatambi munhoroondo! Iye akanaka kwazvo Veronique Fernandez Lentisco anofara akaroora kune mutambi wenhabvu mutsigiri Zinedine Zidane. Vakaroorana muna 1994.
Eduardo Camavinga Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Zinedine Zidane Rudo Nyaya naVeronique Fernandez Lentisco.
Chibereko chemuchato wavo chakatanga kuuya gore rakatevera. Vane vana vana vana panguva yekunyora.
Enzo Alan Zidane Fernández akaberekwa 24 Kurume 1995, Luca Zinedine Zidane Fernández (akaberekwa 13 Chivabvu 1998), Theo Zidane Fernández (akaberekwa 18 May 2002), uye Elyaz Zidane Fernández (akaberekwa 26 December 2005).
Zinedine Zidane Hupenyu Hwemhuri - Vana.
Vese vakomana vana vaZidane vakapfuura neReal Madrid Academy. Mwanakomana wake wekutanga, Enzo mutambi wepakati apo Luca ari muchengeti wemagariro. Theo naElyaz zvakare vari vepakati.
Veronique naZinedine vanga vari pamwechete kuburikidza nehurefu uye hutete kweanopfuura makore makumi maviri kuverenga. Pakutanga, akatanga kurasikirwa nevhudzi mumusoro wake. Iye akati panguva iyoyo: "Mudzimai wangu anondida zvakadaro, saka harisi dambudziko"
Zinedine Zidane Biography - Zvaanorangarirwa nezve:
Zidane angangotarisa seimwe yevanhu vakanyarara kwazvo pasi pano, asi izvozvo zviri kure nechokwadi. Akanga aine mukurumbira nokuda kwehasha dzake dzinopisa-chimwe chinhu icho, maererano nevamwe, chakamutorera imwe mhirizhonga yeChirungu yeNyika.
Zinedine Zidane Biography Chokwadi - Iyo Nharaunda Service Red Card:
Chii chinoitika kana iwe ukawana kadhi tsvuku mumutambo wekupedzisira webasa rako wakapihwa kuti haugone kushandira kumiswa sezvo iwe usisiri mutambi zvekare nekudaro usingazotambe zvakadaro? Unoita basa renharaunda. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Zouzou.
Kevin De Bruyne Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Mushure mekunge 'Zizou' awana kadhi dzvuku rekurova musoro Marco Materazzi, aifanirwa kuita basa renharaunda kubva paakasiya basa akapa iyo isingachashandi.
Nepo ruzivo rwebasa renharaunda risina kuziviswa, zvakanzi aizozvishandira mukati mezviitiko zveFIFA zveRubatsiro. Izvi zvinoreva kuti aigona kunge akatsvaira nzira kana kuchenesa zvimbuzi, ndiani anoziva?
Asi chatinoziva ndechekuti kana iwe ukawana mutsvuku mumutambo wekupedzisira weyts basa rekuita zvechisimba, une chokwadi sezvo gehena risingazobvisike nazvo nekubhadhara faindi chete.
Zinedine Zidane Biography Chokwadi - Tsvuku Kadhi Rekodhi:
Achienderera mberi nenyaya inotaurwa pamusoro pekuita kwake kusina maturo, Zidane ane imwe nhoroondo pasi pezita rake-chimwe chinhu chaasingadi kuva nacho.
Sezvo iye anga achitamba mumutambo wake wechipiri-wakamboitwa Mukombe wePasirose neSaudi Arabia mu1998, French-Algeria yakaratidza imwe yeanokodzera sezvaaitsika mutambi weSaudi Fuad Anwar.
Marcelo Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Izvo hazvina kuenda zvisina kucherechedzwa sezvo muridzi wepembe akaburitsa kadhi dzvuku rakatwasanuka pachiito chekuzvidza chaZidane, zvichimuita mutambi wekuFrance wekutanga kuburitswa mushure mekugamuchira kadhi dzvuku mumutambo weWorld Cup.
Zinedine Zidane Chokwadi - Tsvuku Kadhi Nhoroondo.
Mukupedzisira, akazviitira sezvo zvibodzwa zvake zviviri mukupedzisira kwemutambo uyu zvakapa France mukombe weWorld Cup wekutanga.
Zinedine Zidane Biography Chokwadi - Yekutanga Mota:
Zinedine Zidane akaita dambarefu rake reCannes pazera rekuti 16. Mutungamiri wekirabhu aifarira korona yake zvekuti akamuvimbisa mota sechipo paakarova chinangwa chake chekutanga kukirabhu. Uye aifanira kumirira makore maviri kuti aise ruoko rwake pamotokari nyowani.
Pa 10th yaFebruary 1991, akarova zvibodzwa zvake zvekutanga kukwikwidza kurwisa Nantes mumutambo uyo wakakundwa zvishoma neCannes ne2 zvibodzwa ku1.
Yaiva yekutanga yezvinangwa zvakawanda zvaakaenderera mberi pakukwanisa kuita basa rake. Angave asina zvinangwa zvakawanda izvo munhu angatarisira kubva kumunhu anenge ari kurwisa. Zvisinei, pane chirevo chokuti aivenga kuva mukati mebhokisi raipikisana uye achangoda kufudza varoki panzvimbo.
Zinedine Zidane Chinangwa Chinangwa:
Tose tinorangarira Zidane nokuda kwake headbutt muCNC Cup final. Izvi zvisati zvaitika, akarangarirwa nekuita kwake kunoshamisa achipesana neBrazil mukupedzisira kweNdebe yeNyika ye1998.
Mumutambo iwoyo, akawana zvinangwa zviviri zvekutungamira Les Blues kune kukunda 3-0 kupikisana neBrazil. Vakawanda vanoziva izvi. Zvisinei, izvo vakawanda vasingazivi ndezvokuti zvinangwa zviviri zvaakawana-uye zvichiripo-zvinangwa zviviri chete zvaakamboita kurwisa nyika yeSouth America kune imwe nyika.
Icho chinhu chaicho chisingazivikanwi chakapiwa kuti basa rake rakapera kwemakore anodarika gumi uye rakange rakatarisana nevamwe vasati varwisana neLatin. Zvisinei, izvozvi zvinangwa zviviri zvaive zvimwe zvakakosha zvikuru zvaakamboita.
Zinedine Zidane Biography Chokwadi - Akafuridzirwa Vazhinji muBhola:
Iye muIdhori kune avo vanenge vese vese vemaMuslim evematambi avo vakatanga varombo muEurope.
Kuita kwechikwata chake paFIFA 1998 World Cup kwakakurudzira zvaifarirwa ne Karim Benzema, N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko, Thomas Lemar, Anthony Martial, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele uye Alexandar Lacazette kutora bhora zvakanyanyisa munguva dzevechidiki.
Zinedine Zidane Chitendero Kupokana:
Hapana chinhu kunze kwemufananidzo uyu pazasi unoti iye muMuslim anozvipira.
Jorginho Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Kunyanya zvakadaro, kutumidza vana vake vose mukristu Mazita zvakare ari kupokana nekumutsanangura se "muslim akazvipira". Nekudaro, iye aizivikanwa kuti kazhinji aiti Ayat al-Kursi pamberi pemutambo wega wega paakange ari wenhabvu.
Nikola Vlasic Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Mikel Oyarzabal Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yann Sommer Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Unai Simon Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Eder Militao Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
VaNorway Bhora Vatambi
Martin Odegaard Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Moroccan Nhabvu Vatambi
ASIAN-OCEANIAN MITAMBO YENYAYA
ZVIMWE ZVINOTAURA ZVEMAHORO
Algeria Nhabvu Vatambi
AMERICAN BHUKU DZEMAHARA
Oceania Nhabvu Vatambi
VaPolish Bhora Vatambi
Scottish Nhabvu Vatambi
Serbian Bhora Vatambi
Turkish Nhabvu Vatambi
United States Nhabvu Vatambi
Vatambi venhabvu veZambia
James Rodriguez Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
David Beckham Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
SUSBSCRIBE KUNE LIFEBOGGER STORIES!
Ini ndinobvuma kune yevanzika mutemo uye mazwi. (batanidzo)
KUNYANYA KUNYANYA KUKOSHA KWENYAYA DZEMAHARA
Dai 3, 2021
N'Golo Kante Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
ZVINOKOSHA !! LifeBogger haiti muridzi weimwe yemifananidzo yakatumirwa pane ino webhusaiti. Zvekare, isu hatiiti mapikicha kana mavhidhiyo pachedu. Vanyori vedu vanongobatanidza kune muridzi ane kodzero. Chekupedzisira, LifeBogger yakanyatso fungisisa nekuongorora zvese zvirimo. Kunyangwe zvakadaro, zvinokwanisika kuti rumwe ruzivo rwunogona kunge rwuri rwechinyakare kana rusina kukwana.
Taura nesu: admin@lifebogger.com
© HupenyuBogger Copyright © 2021.
Nomutsa Nyorera kuLifebogger!
Tora Nhabvu Nhau kuInbox yako
Vhara iyi popup